ပါဏဗေဒ အလိုအရ သိပ္ပံနည်းကျ ဇီဝမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (တက်ဆွန်)[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Benton၊ Michael J. (2005)။ Vertebrate Palaeontology (3rd ed.)။ Oxford: Blackwell Science Ltd.။ ISBN 978-0-632-05637-8။ 19 October 2008 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တွားသွားသတ္တဝါ&oldid=727292" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။